बैंककी कर्मचारीले वि’ ष सेवन गर्नुअघि ‘नोट’ मा यस्तो लेखेकी रहेछिन, जसले सबै लाई झस्कायो ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/बैंककी कर्मचारीले वि’ ष सेवन गर्नुअघि ‘नोट’ मा यस्तो लेखेकी रहेछिन, जसले सबै लाई झस्कायो !
विराटनगर । एउटा नीजि ब्यंकमा कार्यरत युवतीले विराटनगरमा देह त्याग गरेकी छन् । उनले आफ्नो वुवा आमाको नाममा एउटा नोट पनि लेखेकी छन् । सनराइज बैंक शाखा कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले देह त्याग गरेकी हुन् । उनी कार्यालयको शौचालयमा ग म्भि र अवस्थामा फेला परेपछि अस्पताल लगिएको थियो । अस्पतालमा उनको निधन भएको हो। निधन हुनेमा विराटनगर महानगरपालिका ८ सहयोगी टोलकी ३० वर्षीया सनाज खतिवडा हुन् ।
मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले दिएको जानकारी अनुसार उनले मु’सा मा र्ने वि ष पीएकी थिइन् । उपचारका लागि नोबेल अस्पताल लगिएको उनको अस्पतालमै निधन भएको हो ।बैंकको कार्यालयको शौचालयभित्रै उनलाई बे होस अवस्थामा भेटिएको थियो। छेउमै वि षा दीको ब’ट्टा पनि भेटिएकाले उनको निधनको कारण वि ष भएको अनुमान गरिएको छ ।
प्रहरीले फेला पारेको ‘नोट’ मा खतिवडाले बाबु र आमालाई सम्बोधन गरेको पाइएको छ । नोटमा आफ्नै कारणले मरेको र यस घटनामा कसैलाई पनि दोष नदिन भनिएको राईले बताए । मृ’ तक युवतीले बैंकमा आफ्ना बाबुको नाममा २० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको र विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा आफ्नो शेयर रहेको नोटमा उल्लेख गरेको जानकारी राईले दिए । खतिवडा परिवार नजिकका एक सदस्यका अनुसार युवतीमा केही दिनदेखि मानसिक तनाव देखिएको थियो ।
मृ त’क युवतीले बैंकमा आफ्ना बाबुको नाममा २० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको र विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा आफ्नो शेयर रहेको उल्लेख गरेकी छन् । खतिवडा परिवार नजिकका एक सदस्यका अनुसार युवतीमा केही दिनदेखि मानसिक त ना व देखिएको थियो। सातादिन अघि पनि युवतीले देह त्यागको प्रयास गरेको जानकारी परिवारले प्रहरीलाई दिएको डीएसपी राईको भनाइ छ।